Soomaaliya: Ganacsiyada ay haweenku hogaamiyaan oo kordhay iyada oo ay jirto saameynta Covid-19 | ICRC da Soomaaliya
Soomaaliya: Ganacsiyada ay haweenku hogaamiyaan oo kordhay iyada oo ay jirto saameynta Covid-19
26/06/2021 , Maqaallo
Caabuqa faafa ee Covid-19 ayaa sababay ganacsiyo fara badan in ay ku dhawaadaan in ay xirmaan, taas oo u keentay ganacsato badan daqli la’aan. Qoysaska ay dumarku hogaamiyaan ayaa wajahaya dhibaatooyin nuucaas oo kale ah maadaama badankoodu leeyihiin ganacsiyo yar yar sida dukaamo yar yar, maqaayado, dukaamada cuntada, dukaamada dharka iyo bacadleyaal.
Qiimaha cuntada iyo badeecadaha kale ayaa sare u kacay cududurka faafa awgiis, taas oo saameyn ku yeelatay helitaanka badeecadaha iyo dhameystirka alaabta iyo xaddiga iibinta. Dukaanleyda ayaa qaaday tallaabooyin taxadar leh sida ka fogaanshaha iibinta amaahda iyo dib u keenidda alaabta oo ay xadideen.
Guddiga Caalamiga ah ee Laanqeyrta Cas (ICRC) ayaa ku taageera qoysaska uu daqligoodu hooseeyo in ay billaabaan, dib u bilaabaan, ama ay ballaariyaan ganacsiyada yar yar ee horay u jiray oo gacan ka geysan kara daqliga qoyska sidoo kalena dhalin kara hab nololeed wanaagsan oo sii jiri kara.
Tababarka xirfadaha ganacsiga ayaa sidoo kale la bixiyaa si loo hagaajiyo maareynta ganacsiga. Si loo hubiyo isdhexgalka saxda ah inta lagu jiro tababarka, ka qeybgalayaasha waxaa loo qeybiyaa hadba meesha ay joogaan iyo nuuca ganacsigooda. Qarashaadka iyo qiimaha, xirfadaha suuq geynta, diiwaan galinta xisaabta, iyo maareynta ganacsiga aasaasiga ah ayaa ka mid ahaa mowduucyada la soo qaatay inta lagu jiray koorsada.
Tababarka ka dib, ayaa ganacsatada midkiiba la siiyay 500 oo doolarka Mareykanka ah oo kaash ah si looga caawiyo horumarinta ganacsigooda. Ilaa sanadkii 2021ka, in ka badan 200 oo haween ah ayaa lagu caawiyay sidii ay u horumarin lahaayeen ganacsigooda.
Sideed ganacsi oo ay haween hogaamiyaan oo ku yaalla Xamar Weyne, magaalada Muqdiho.
Gancsiyada dharka iyo harqaanka
Xamar Weyne, oo leh suuq aad u mashquul badan oo ay ka buuxaan tafaariiqleyda iibinaya cuntada, dharka iyo alaabta la isku qurxiyo, ayaa ah degmada ugu qadiimisan magaalada Muqdisho. Asli Salaad Faarax oo ah 56 jir oo iibin jirtay dharka huudheyda ah ayaa hadda iibisa dhar cusub.
“Waxa aan dukaan ku leeyahay degmada Xamar Weyne ee magaalada Muqdishu. Waxa aan ahay hooyo heysata 10 caruur ah anigoo isla markaana ah qofka qoyskeyga u shaqeeya” ayey tiri.
Waxa ay iibisaa dharka dumarka, ragga iyo caruurta. Waxa ay aad mashquul u noqotaa xilliyada damaashaadka sida Ciidda iyo aroosyada markaas oo ay dadku koox koox isu raacaan si ay dhar u soo iibsadaan.
“In ka badan 20 sano ayaan dhar ku iibinayay magaalada Muqdisho”. © ICRC/ Ismail Taaxta.
Maadaama uu jiro Covid-19, tiro yar oo wax iibsanaya ayaa soo booqda dukaankeeda. ICRC-da ayaa ku taageertay Asli 500 oo doolarka Mareykanka ah si loogu caawiyo horumarinta ganacsigeeda. Waxa ay ku dartay lacagta si ay ugu kordhiso keydka dharka ay iibineyso. © ICRC/ Ismail Taaxta
Asli ayaa u yeereysa macaamiisheeda iyada oo rajo ka qabta in ku soo jiidato dukaankeeda. “Soo dhawow, soo dhawow” oo macneheedu yahay “ii kaalay” si aad u aragto nuucyadii ugu danbeeyay ee dharka”. © ICRC/ Ismail Taaxta
Maryan Abuukar Xaji ayaa ah harqaanlaha kaliya ee dumarka ah ee degmada Xamar Weyne oo si gaar ag uga shaqeysa naqshadeynta iyo tolidda dharka dumarka. Dharka Somaalida badankood waa kuwa si gaar ah loo farsameeyay taa oo harqaanleyaasha ka dhigeysa kuwo aad dalabkoodu u badanyahay.
“Macaamiisheydu haween ayey u badan yihiin. Aniga ayey ii imaadaan maxaa yeelay waxa ay u riyaaqsanyihiin in ay qof dumar ah oo iyaga la mid ah ay cabirka ka qaado,” sidaas ayey sharraxday.
Maryan ayaa tosha dharka dumarka sida baatiga, oo ah dhar dabacsan, gacmo gab suuf ah oo ay dumarka Soomalidu guryaha ku joogaan. Waxa ay sidoo kale toshaa xijaabada, masarka madaxa oo ay dumarka muslimku xirtaan. © ICRC/ Ismail Taaxta
Maryan waa hooyo kaligeed ah oo hal cunug leh. Waxa ay isaga bixin kartaa lacagta iskuulka, kirada, iyo korontada iyo biyaha lacagta ay ka hesho ganacsigeeda. © ICRC/ Ismail Taaxta
Maryan waxa ay ku caantahay naqshadaheeda gaarka ah, kuwaas oo harqaankeeda ku soo jiida tiro badan oo macaamiil ah. Waxa ay sidoo kale iibisaa dharka; oo ay macaamiil badani dooqan karaan si markaa ka dib loogu tolo. © ICRC/ Ismail Taaxta.
Dukaamada yar yar
Dukaamada cuntada, oo iibiya cunto, alaabo kale, iyo alaabta nadaafadda guryaha, ayaa ku badan degmada Xamar Weyne.
Maryan Maxamed Yuusuf ayaa ah milkiilaha mid ka mid ah dukaamada halkaa ku yaalla. Waxa ay iibisaa cabitaanada fudud, caleenta shaaha, sokor, nanac, caano, bariis, saabuun iyo badeeco kale.
Maryan ayaa dukaan ku laheyd wadada dhinaceeda degmada Xamar Weyne labadii sano ee la soo dhaafay. “Daqliga dukaanka aan ka helo ayaan ku bixiyaa cuntada iyo lacagta iskuulka shanta caruur ah ee aan dhalay” ayey tiri. © ICRC/ Ismail Taaxta.
Waa mid ka mid ah haweenkii ka faa’iideystay tababarkii xirfadda ganacsiga iyo taageeradii lacageed oo ay ICRC-du bixisay. © ICRC/ Ismail Taaxta.
Ka dib markii ay heshay 500 oo doolar, Maryan ayaa gabi ahaanba dukaankeeda badeeco ka soo buuxisay. “Hal shey oo aan ka bartay tababarka ayaa ah in deyntu aysan u wanaagsaneyn ganacsiga, sidaas darteed waxaan isku dayaa in aan ka fogaado mar kasta oo ay suurogaltahay.” © ICRC/ Ismail Taaxta.
Ceebla Muqtaar Guhaad ayaa maamuleysay dukaankeeda 30kii sano ee la soo dhaafay. Dukaankeeda ayey ka furtay meelo badan oo Muqdisho ka mid ah mudadaas sanadaha badan ah. Dukaanka ayaa hadda ku yaalla meel aad muhiim u ah, isaga oo ay joogto u imaadaan tiro badan oo macaamiil ah.
Ceebla ayaa iibisa canbo iyo moos, iyo sidoo kale caano, cabitaano qabow, buufin iyo nanac. Odageeda ayaa maamula ganacsi labadaanyo ah, labadooda ayaa caruurtooda todobada ah daqligooda ku wada koriya. © ICRC/ Ismail Taaxta.
Dukaanka Ceebla waxa uu ugu mashquul badanyahay subaxdii iyo fiidkii, markaa oo ay macaamiisheedu u imaadaan si ay u iibsadaan alaab guryaha muhiim u ah. © ICRC/ Ismail Taaxta.
Waxa ay heshay 500 oo doolar si ay kor ugu qaado dukaankeeda iyada oo cuntooyin dheeri ah ku soo dareysa. Waxa ay ku soo dartay raashin aad u fara badan oo ay iibineyso. © ICRC/ Ismail Taaxta.
Biibitooyinka iyo maqaayadaha
Maqaayadaha iyo meelaha lagu cunteeyo ayaa waxaa saameyn ku yeeshay caqabadaha Covid-19, iyada oo la xusi karo xadidnaanta asxaabta iyo qoysaska wax wada cunaya.
Duniyo Maxamed Axmed, oo 36 ah, ayaa maqaayad ku laheyd Muqdisho todobadii sano ee la soo dhaafay, halkaa oo ay ku diyaariso cuntooyinka fudud ee Soomaalida iyo cuntada caadiga ah.
“Ganacsigani waa meesha kaliya oo aan daqli ka helo oo aan ku qoodin karo gabadheyda iyo odageyga oo aan hadda shaqo heynin” ayey tiri. © ICRC/ Ismail Taaxta.
Sambuusku, waa bur la shiilay oo laga buuxiyay hilib shiidan, digaag, ama kalluun oo lagu quraacan karo ama fiidkii cunto fudud ahaan loo cuni karo iyada shaah ama qaxwo lagu cabayo. “Si aad cuntada ugu raaxeysato, waxaa muhiim in aad saxan la wadaagto qoyskaada ama asxaabtaada”. © ICRC/ Ismail Taaxta.
Macaamiishu way imaadaan si ay cunto u qaataan iyaga oo ilaalinaya tallaabooyinka ka hortagga Covid-19. “Cudurkan ka hor, maqaayaddu mar kasta waa ay buuxi jirtay qadada iyo quraacda",¨. © ICRC/ Ismail Taaxta.
Faaduma Maxamed Cabdiraxmaan waxa aya sameysaa sambuuka iyo mash-mashka – (waa macmacaan ka sameysan bur iyo sokar). Ganacsigan waxa ay ku jirtay muddo 30 sano ah hadda.
Maalin kasta 6:00 a.m., ayey furtaa maqaayadeeda si ay wax u kariso. Subaxda hore iyo galabtii saacadaha danbe ayaa ah sacadeheeda ugu fiican, maadaama ay soomaalida macmacaanka ku cabaan Shaah – koob shaaha oo kulul oo dhir leh.
“waxa aan sameeyaa mashmashka magaalada ugu wanaagsan” ayey tiri.
Faadumo maqaayadeeda waxaa la furaa subaxdii 6:00 a.m. iyada markaas ka dib dadka ka iibisa bur iyo shaah. © ICRC/ Ismail Taaxta.
Mashmashku waa cunto fudud oo Soomaali ah oo badanaa sambuuska lagu cuno. Waxa ay sameynayaan isku darka macaanka iyo dhanaanka oo ay cuntada Soomaalidu caan ku tahay. Waa cunto fudud oo la cuno subaxdii niyo galabtii. Waxa ay ka sameysantahay bur, biyo iyo sokor, diyaarinteeduna wey fududahay. © ICRC/ Ismail Taaxta.
Kalyantiga Faadumo ee joogtada ah waa dad ka imaada nawaaxiga Xamar Weyne. Caruurta ayaa ku soo xooma agteeda si ay u helaan burkeeda macaanka badan leh. © ICRC/ Ismail Taaxta.
Wadooyinka Xamar Weyne, Xaawa Ibraahim Cali ayaa ku iibisa lows. Waa hooyada toban caruur ah iyada oo sidoo kale korisa afar caruur ah oo uu walaalkeed dhalay.
Xaawo ayaa lowska cusbo ku darta una xir-xirta siyaabo kala duwan. Waxa ay u qoondeysaa mid kasta qiimihiisa. Macaamiisheedu badanaa waa caruur maadaama ay lowska u isticmaalaan cunto fudud ahaan. © ICRC/ Ismail Taaxta.
Maalin kasta, Xaawo ayaa dubta lowska. Markaa ka dib ayey iibisaa iyada oo u xir-xirta siyaabo kala duwan. Qiimaha waxa uu ku xiranyahay bacda uu ku jiro. © ICRC/ Ismail Taaxta.
Lowsku waa cunto fudud oo macaan badan oo shaaha ku macaan. Xaawa waxa ay iibisaa lowska qolofkiisa wata iyo kan la fiiqay labadaba. © ICRC/ Ismail Taaxta.
Cillaanka ayaa muddo dheer ahaa hab ay jecelyihiin dumarka Soomaaliyeed in ay u qurxiyaan gacmahooda iyo lugahooda munaasabadaha gaarka ah sida aroosyada, Ciidaha, iyo isku imaatinka kale ee bulshada.
Faaduma Axmed, oo ah 22 jir, ayaa ah milkiilaha meel la isku qurxiyo oo gaar ahaan ka shaqeysa hagaajinta timaha iyo cillaan saarka.
“Aad ayaa ugu farxaa marka aan arko macaamiisheyda oo ka baxaya dukaankeyga iyaga dhoollacadeynaya quruxna dareemaya,” ayey tiri.
Faadumo waxa ay aad u shaqeysaa xilliyada damaashaadka ciidaha iyo aroosyada. Dadka ayaa joogto u yimaada burkiyeerkeeda. © ICRC/ Ismail Taaxta
Faaduma ayaa isbartay sida cillaanka loo saaro, kaa oo ay hadda ugu shaqeyso ganacsi ahaan. Waa hooyo kaligeed ah oo hal cunug heysata, lacagteeda ayaana u suurogalisa in ay qoyskeeda taageerto. © ICRC/ Ismail Taaxta.
“Cillaan saarku waa nuuc aartiska ka mid ah” ayey tiri. © ICRC/ Ismail Taaxta.
Wixii sheekooyin dheeraad ah ee ku saabsan booqashada websaydhka ICRC.